Sawirro: Rooble iyo safiirka Mareykanka oo kulmay kadib xayiraaddii lasoo rogay - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Rooble iyo safiirka Mareykanka oo kulmay kadib xayiraaddii lasoo rogay
Sawirro: Rooble iyo safiirka Mareykanka oo kulmay kadib xayiraaddii lasoo rogay
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaararaha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan la qaatay safiirka Cusub ee Dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Larry André.
Rooble iyo Larry Larry André ayaa ka wada hadlay doorashada Soomaaliya oo waqtigeeda ka dib ka dhacday, wuxuuna Rooble la wadaagay safiirka Mareykanka in howsha doorashada ay ku socoto si wanaagsan isla markasna lagu soo gabagabeen doono waqtigeeda.
Sidoo kale Rooble iyo André ayaa ka wada hadlay amniga Soomaaliya iyo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab, ayada oo sidoo kalena isku soo hadal qaaday sidii ay dowladda Mareykanka gacan uga geysan laheyd abaaraha baahsan ee ka jiro Soomaaliya.
Safiirka Mareykanka ayaa Ra’iisul Wasaare Rooble u ballan qaaday inuu kala shaqeyn doono dhameystirka Doorashada iyo sugidda Amniga.
Kulankan ayaa ku soo aaday maalmo kadib markii xoghayaha Arrimaha Dibedda Mareykanka Antony Blinken uu Talaadadii ku dhowaaqay soo saarista xayiraado Visa oo ka dhan ah shakhsiyaad hadda xilal ka haya iyo kuwa horey uga soo qabtay Soomaaliya, oo lagu eedeeyey inay mas’uul ka yihiin waxyeeleynta hanaanka dimoqraadiyadda Soomaaliya.
Blinken ma shaacin magcayada shakhsiyaadkan lagu beegsaday siyaasaddan.
Mareykanka ayaa horey u sheegay inuu xayiraado la beegsan doono madaxda Soomaaliya haddii aan doorashada lagu dhameyn kahor 25-ka Febraayo, waxaana laga cabsi qabaa inuu soo rogo kuwa cusub.